Mepụta akwụkwọ ọnụahịa ndị ọkachamara na Akwụkwọ ọnụahịa Mate maka Mac, n'efu maka obere oge | Esi m mac
More na ndị ọzọ anyị na-ahụ freelancers ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ ndị na-enweta kọmputa Mac maka mmemme ọkachamara, yana iji uru na arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ anyị. Ha na-abụkarị ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na yabụ nke anaghị achọ njikwa na ịgba ụgwọ nke usoro nlekọta ọkachamara nwere ike ịnye. Kama nke ahụ, ihe ha chọrọ bụ usoro ndebiri iji mepụta ọrụ ndị ahụ ugboro ugboro, dị ka atụmatụ, akwụkwọ ọnụahịa, wdg.
N'ọnọdụ ahụ, taa anyị na-ewetara a setịpụrụ ndebiri nde 80 maka Okwu Microsoft, nke ga - enyere anyị aka iji akwụkwọ ọnụahịa nwere ọkwa mara mma nke ezigbo ọkachamara. Ọ bụrụ na ị na-ebu ọnụ, ị ga-ahụ n’efu n’obere oge.
Ozugbo anyị na-ebudata ngwa site na Mac App Store, anyị na-eche 80 ndebiri dị iche iche ihu, ịhọrọ ụdị nke kachasị mma maka ọrụ anyị. Nke mbu, es a ga-enwe ekele bụ na ọ ga-ekwe omume itinye akwụkwọ anyị. Site na nke a, anyị na-apụ apụ ma na-enye ọrụ ọhụụ na nke ugbu a nke azụmaahịa anyị.
Na-anọchi maka a ọrụ dị mfe. Ọ dị mfe ịkwadebe akwụkwọ ọnụahịa gị ọbụlagodi na ị maghị nke ọma n'okwu ahụ. Ozugbo ejuputara, anyị ga-ebipụta akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ zigara ya site na email ozugbo.
Ngwa taa bụ n'efu. Ingnweta Mac App Store, a ga-ebudata mkpọ anyị nke ndebiri 80 na sekọnd ole na ole, ebe ọ bụ na naanị ibu ha dị 51 Mb. ogo mmezi nke ngwa anyị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwa ndị a, dị n'okpuru pịa ka ibudata ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mepụta akwụkwọ ọnụahịa ndị ọkachamara na Akwụkwọ ọnụahịa Mate maka Mac, n'efu maka obere oge
Valvaro Augusto Casas Vallés dijo
Zaghachi Álvaro Augusto Casas Vallés
Ndewo m etinyego ihe omume ahụ, m na-emeghe ya, ndebiri na-apụta, m pịa abụọ ma ọ mepee onye nchọta na ọ bụ ya. Ọ bụghị ihe na-eme
Biko ị nwere ike ịgwa m ka o si arụ ọrụ, biko?